Ilwareed.com » Waa maxay Babaasiir (Haemorrhoids)? Maxay yihiin Calaamadaha lagu garto ?
Taliyihii ciidanka Ilaalada ee wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka jubba oo caawa lagu dilay magaalada kismaayo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka digay weeraro ka dhaca Baladweyne, haddii aan la joojin banaanbaxyada Madaxweyne Xasan Sheekh “Dowladda waxaa ka go’an xaqiijinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Siyaasiyintii ka soo horjeeday Maamulka Jubba oo sheegay in uu burburay heshiiskii lala galay Maamulkaasi Nabadoon Cumar Yuusuf ciidanka New Police 15 ruux ayay ku dileen inta u dhaxeyso mustaxiil iyo khilaafe SOMALI LINKS
Waa maxay Babaasiir (Haemorrhoids)? Maxay yihiin Calaamadaha lagu garto ?
November 16, 2012 - Written by ilwareed - Edited byilwareed Babaasiirtu waa sida xidido laamo leh oo ku yaalla marinka futada. Marka xididada noqdaan kuwo la bararsan dhiig, waxa timaada babaasiir.
Xididka bararsani waxa uu saameyn karaa mareegta qaybteeda wax yar ka sareysa marinka futuda, halkasoo qaybtaasi aanay taageero sidaa weyn ka haysan duubka muruqa ah (sphincter), waxana taasi ay keentaa babaasiir gudaha ah. Ama waxa laga yaabaa inay saameyso xididada ku yaalla xagga hoose ee marinka, meel wax yar ka hooseysa maqaarka, taasoo keenaysa babaasiir dibadda ah.Dadka qaarkii waxay qabaan labada noocba.
Waxa loo haystaa in babaasiirta ay caloosha adagi sababto. Haddii calooshu ku adag tahay muddo dheer badanaana ay dhib kugu tahay sidii aad u dhigi lahayd saxarada adag, waxay taasi dhaawac u geysan kartaa gidaarka ama darbiga marinka futada. Haddii taasi kugu dhacdo marrar xoogaa ah oo ku filan in dhibaato timaado, waxa laga yaabaa in xididada ay ka lumaan taageerada iyo badbaadinta caadiga u ahayd. Waxa loo haystaa in dadka qaarkii ay leeyihiin xidido u jilicsan dhaawaca noocaasoo kale ah. Waxay u badan tahay in taasi la xiriirto kala duwaanta jirka dadka oo ah arrin nasiib ah.
Ma jirto hab hubaal ah oo lagu joojiyo babaasiirta, laakiin cunto leh duf ama buushe badan ayaa wax wanaagsaan ah oo lagaga bilaabo ka-hortagga. Waxa taasi yareynaysaa halista caloosha oo joogsata iyo saxarada oo dhib iyo ducasho lagu soo saaro taasoo keeni karta babaasiir.
Cuncunka iyo raaxo-darada ka timaada babaasiirta waxa lagaga nafisi karaa noocyo kala duwan oo ah dabo-galis (subooso) iyo labeen ama boomaato. Kuwaasii waa tallaabooyin lagu daaweynayo calaamadaha laakiin ma bogsiinayaan xaaladda ku haysata
Caadil Xaaji Cabdi.